ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5ရူးသွပ် (သို့သော်စစ်မှန်သော) သင်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအရာတို့ကိုသိရန်လိုအပ်!
၎င်းသည်သင့်အားသင်အချို့သောသုတေသနများလုပ်ဆောင်သည့်အခါကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်နှင့်သင်ချိန်းတွေ့ဤကမ္ဘာကြီးနှင့် ပတ်သက်. အလျင်းမသိမှုအရာတို့ကိုထုတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. အခြားသူများကိုအပြင်းအထန်သို့မဟုတ်တောင်မှပဲစိတ်ဝင်စားဖို့နိုင်ပါသည်နေစဉ်သင်ဖတ်တချို့ကအချက်များကိုအိမ်သော့သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာများရရန်သင်၏အမှုကိုကူညီနိုင်. နောက်ကျောထိုင်နေ, မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ငါးပါးချိန်းတွေ့အချက်အလက်များကြောင့်တအံ့တသြခံရ!
အလုပ်ခွင် Romance အဆိုပါနေ့၌့လမ်းစဉ်မဟုတ်!
အလုပ်ခွင်ဆက်ဆံရေးဇစ်မြစ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအံ့သြဖွယ်အကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားအောင်မြင်မှုနှုန်းရှိသည် 40% အစားတစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများအတွက်အသက်မရှင်မယ့်သူကလူအများကြီးရှိခဲ့၏သဘောတွင်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည့်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အဆုံးသတ်အလုပ်အချစ်သီချင်း၏’ ထိုလမ်းများတွင်ဒါပေမယ့်လုံးဝအံ့သြစရာမဟုတ်ပေတစ်ချိန်တည်းမှာအိတ်ကပ်. သင်ဟာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကိုချစ်. အကယ်လို့သင်ဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူဘုံတွင်တစ်ခုခုရှိသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြစ်နိုင်လွန်းပြုပါနှင့်သင်နှစ်ဖက်စလုံးတခုတခုအပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ပေါက်ကြလိမ့်မည်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိမယ့်အတူတူသိပ်အချိန်ပေး.
အတိတ်တွင် TLC နှင့် Chemistry.com stats သူမကမိတ်ကပ်ဝတ်ဆင်င်လျှင် bar တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ခြောက်မိနစ် ပို. မြန်ဆန်ပျမ်းမျှတက် chatted လိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုပြပြီ. တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ဦး fancies လျှင်ငါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်စဉ်းစားသူတို့တစ်တွေ bit နဲ့ရှေ့ဆက်သို့မဟုတ် chatty သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တက်စကားပြောခန်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါကူညီနိုင်ထင်ဟုဖြစ်ကြ၏. သင်သည်အညစ်အကြေးအစွန်းတက်ကိုဖုံးအုပ်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ယူသင့်ရဲ့အဆင်သင့်ခံစားနိုင်ပါတယ်. ကယုံကြည်စိတ်ချမှုသို့မဟုတ်သင့်အစက်အပြောက်မပြကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအငြင်းအခုန်ဖို့ပွင့်လင်းသည်သင်တို့ရရှိသွားတဲ့သောကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်!
ABC ရုပ်သံကိုအများဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှာပြင်ပလိင်ဆက်ဆံကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြ 57% စဉ် 14% တစ်ဦး threesome ခဲ့ကြပြီး 21% သူတို့အကအကြောင်းတွေးမိပါပြီ. ငါးစုတစုတို့သည်မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်လိမ်လည်လှည့်ခဲ့ကြဟုဆိုသည်ထက်နည်း, သို့ရာတွင်ထိုသူတို့၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့် cheat အကြောင်း fantasized ပါပြီ. ကိုယ့်အမေရိကန်တွေ၏ထက်ဝက်ကျော်သူတို့ပွင့်လင်းများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏အတူမိတ်ဖက်အဖွဲ့များသည်ဤစိတ်ကူးယဉ်ဆွေးနွေးသည်ဟုဆို. ကိုယ်ကဤမျှလောက်များစွာသောလိင်ကသူတို့ကို excites အဘယ်သို့သောအကြောင်းသူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်များနှင့်ပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကြီးမြတ်င်ထင်ပေမယ့်ငါသူတို့ဖြစ်ကောင်းနောက်ကျောကိုစောင့်ရမည်ထင် “ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ဘွယ်သောအပေါ်ကိုလိမ်လောက် fantasized ။” လိုင်း!
တစ်စုံတစ်ဦးကအတူတူရပ်နေသည်ကိုအဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုရင်လူမှုရေး event မှာစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်ဖို့ကခက်ခဲတွေ့သူတို့သည်တဦးမှဆွဲဆောင်နေကြတယ်. သူတို့ကအခြားမိတ်ဆွေသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအားဖြင့်စွန့်ပစ်မှုခံစားရချင်ကြပါဘူး. ဒါကြောင့်သင်ဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုအထူးတလျှောက်တွင်အဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက်ကိုရောက်စေကြောင်းတွေ့ရှိရန်ရှာလျှင်!
မင်္ဂလာဆောင် Stats ကတော့!
နယူးယောက်နှင့်ဝါရှင်တန်လက်မထပ်ရသေးသူအများစုပြည်နယ်ဒေသခံများရှိသည်. ယခင်ဖြစ်ပါသည် 50% နှင့်နောက်ဖြစ် 70% ဒါကြောင့်အထင်ကြီးဖို့က New York နဲ့ဝါရှင်တန်ကူးရ! ပိုမိုမြင့်မားသောမင်္ဂလာဆောင်ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြည်နယ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အိုင်ဒါဟိုနှင့် Utah မှာရှိပါတယ် 60% နှင့် 59%.